1) Nwee ihe mgbaru ọsọ doro anya nke eriri waya-gịnị bụ ojiji gị nke eriri waya. 2) Kedu ụdị waya ị masịrị? Black Annealed Waya-mfe udi, oké erughị ala ike, mfe na nchara. Hot tinye kpaliri Waya-enwu gbaa na ndị mara mma, kacha nchebe megide corrosion. Electro kpaliri -...
Kedụ ka ị na-esi nweta eriri ụdọ?
E nwere ọtụtụ ojiji dị iche iche maka waya ọkụkọ. Ọ dị ọtụtụ karịa ka ị ga-atụ anya ya. Otu n'ime ihe ndị kachasị iche bụ ịkpụzi wiwi hexagonal n'ime iberibe ihe ọkpụkpụ. Ivan Lovatt, onye ọkpụ ihe si Australia, mepụtala ihe osise dị ịtụnanya. Iji galvanized ọkụkọ wi ...
A KWES FEWR US USLỌ NKE AKW OFKWỌ AKW GKWỌ AKW GKWỌ
Otu n'ime nhọrọ kachasị amasị na usoro nke fencing, a na-ahụta njikọ zinc na-ekpo ọkụ zinc nke njikọ sistemụ dị ka ezigbo usoro fencing. A na-eji wiwi galvanized mee mgbidi ndị a. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma n'etiti ndị mmadụ ruo ọtụtụ iri afọ mgbe ọ na-abịa na-ekwe nkwa ngwọta fencing. Nke a t ...
Nabata na 121ST CanTON FAIR
Anyị ga-aga China Import na Export Fair (Canton Fair) (15 Eprel na Eprel 19th) na Guangzhou dị ka ihe ngosi. Anyị ga-achọ ịkpọ gị ka ị bịa n'ụlọ ntu anyị (15.4C24) na ngosi na-abịanụ. Ọnụnọ gị ga-enwe ekele dị ukwuu! Anyị ga-ewetara anyị mepụtara ọhụrụ ngwaahịa na mma f ...
Ezigbo ndị ahịa, Anyị ga-aga 2018 INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KOLN (Mar. 4th to Mar. 7th) na Cologne, Germany dị ka onye ngosi. Anyị ga-achọ ịkpọ gị ka ị bịa n'ụlọ ntu anyị (Hall 3.1, D-081) na ngosi na-abịanụ. Ọnụnọ gị ga-enwe ekele dị ukwuu! Anyị ga-eweta ọkwa ọhụrụ anyị mepụtara ...